12 / 05 / 2013 - RayHaber
နေ့: မေလ 12 2013
ray ပြန်လည်မွမ်းမံလုပ်ငန်းခွင် Pazardzhik အတွက်စတင်
12 / 05 / 2013 Levent Ozen 2
ray ပြန်လည်မွမ်းမံလုပ်ငန်းခွင် Pazardzhik အတွက်စတင်: နိုင်ငံတော်မီးရထားအကြားတံတားအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ Hatay İskenderunသံနှင့်သံမဏိစက်ရုံနှင့် Sivas Divriği (FDI) ရထားများပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ Pazardzhik ခြေရာခံပေါ်တွင်အလုပ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ Pazardzhik ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်လိုင်းများဖွင့်လှစ်စတင်ခဲ့ [ပို ... ]
ဌာနေအချက်ပြ£2ဘီလီယံကိုကယ်တင်လိမ့်မည်!
12 / 05 / 2013 Levent Ozen 0
ဌာနေအချက်ပြ£2ဘီလီယံကိုကယ်တင်လိမ့်မည်! : တူရကီနိုင်ငံရထားလမ်း၏ 80 ရာခိုင်နှုန်းပိတ်နေတဲ့အချက်ပြပါမောက္ခ၏အခွအေနကိုညွှန်း ဒေါက်တာ အဆိုပါရထားလမ်းအန္တရာယ်ကင်းနှင့်အဆင်ပြေလမ်းခရီးဘို့စနစ်များကိုပြ၏ Mehmet Turan Söylemezမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်, သူကပြောသည်။ [ပို ... ]
Yenikapıမက်ထရိုဘူတာရုံဆောက်လုပ်နေစဉ်အတွင်းရိန်းဖြုတ်ချခံခဲ့ရ: အလို့ငှာ 19.00 အတွက်ဖြစ်ရပ်များအတွက်မြေအောက်ရထားဆောက်လုပ်ရေး Yenikapi ဘူတာရုံနာရီအကြားYenikapı-Unkapanıလာမည့်ရထားဘူတာရုံမှတည်ရှိသောအဆောက်အဦးကိုလယ်ပြီးစီးအပေါ်မျှော်စင်ရိန်းဖြုတ်ချခဲ့သည်။ သေးဖြစ်ရပ် Causition [ပို ... ]
အေး Ray အတွက်ဘဝအသက်တာ
traffic တူရကီအတွက်ပထမဦးဆုံး Trambus Malatya ရပ်ဆိုင်းမည်
traffic ပထမဦးဆုံး Trambus Malatya တူရကီ Malatya မြူနီစီပယ် Trambus စီမံကိန်းသည်ဆွေးနွေးမှုနှင့် တွဲဖက်. အကောင်အထည်ဖော်ရပ်ဆိုင်းမည်။ နိုင်ငံများလည်းအစ္စတန်ဘူလ်အပြင်ဘက်မြို့ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများအတွက်အခြေအတင်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်။ မြင့်မားသောခရီးသည်တင်စွမ်းရည်နှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီနှင့်İzmirအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ပြစကေးမြို့ကြီးများ [ပို ... ]
တူရကီက Metro အန်းအာရုံစိုက်မှုအတွက်ခရီးသည်
မိခင်မှတူရကီတူရကီက Metro မြေအောက်ရထားခရီးသည်အာရုံစူးစိုက်မှုနှစ်ခုအရာရှိများကမိခင်တစ်ဦးချောမွေ့ခရီးစေရန်အလွန်ကြီးစွာသောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အပျနှံနှင့်အတူနှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်သည့်4အမျိုးသမီးတစ်ဦး motorman နိုင်ငံသားများ၏တဦးတည်း၏အမိ။ အမျိုးသမီးအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားများ, အာရုံစူးစိုက်မှုကို Vatm ကြောင့်အထူးသဖြင့်သူတို့အား [ပို ... ]
နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးကို "နမူနာပြည်သူ့တင်ပို့မှု" တင်ပို့ဖို့တူရကီ Wagon စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Inc ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအားမိမိအလှူငွေများအတွက်TÜVASAŞကိုယ်စားလှယ်ပြည်သူ့ပို့ကုန်ဆုချီးမြှင့်သည့်ဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဟိုတယ်ဟာ Marmara နှင့်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်အလီ Babacan ပို့ကုန်သွင်းကုန်မြှင့်တင်ရေး 2012 ၏ "ကြယ်တက်ရောက်ခဲ့သည်လုပ် [ပို ... ]
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ဒေသများအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်ရေ Interrupt ၏ဆောက်လုပ်ရေး၏မေလ 13 အတွက်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Metro ဘူတာ 22 နာရီဘို့ရေကိုပေးသနားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကြောင့်ဘူတာရုံ၏ဆောက်လုပ်ရေးမှအိုးအိမ်မဲ့သောအစ္စတန်ဘူလ်ရေနှင့် Sewerage အုပ်ချုပ်ရေးဖြင့်ကြေညာချက်သည်တော်လှန်ရေးÜsküdar-Ümraniye-Çekmeköyမြေအောက်ရထားရပ်ကွက် Yamanevler အဆိုအရ [ပို ... ]
TCDD izban ကနေအကြီးစားစကားလုံးများကို
TCDD မှ BZBAN TCDD၊ İZBANမှလေးလံသောစကားလုံးများKarşıyakaIzmir Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Aziz Kocaoglu တွင်မြေအောက်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။ mirZBAN ပရောဂျက်တွင် mirzmir Metropolitan Municipality မှ ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
ကာဇက်စတန်-တာ့ခ်မင်နစ္စတန်မီးရထားလမ်းအာရှအလယ်ပိုင်းမြောက်အဘိဓါန် South စင်္ကြံထဲမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်ကာဇက်စတန်-တာ့ခ်မင်နစ္စတန်-အီရန်ရထားလမ်းကွန်ယက်၏စီမံကိန်းသံလမ်းထိုင်ချေါ။ တာ့ခ်မင်နစ္စတန်မီးရထားလမ်းစီမံကိန်းကိုနယ်ပယ် 926 ကီလိုမီတာနှင့်အတူကာဇက်စတန်ရဲ့နယ်စပ်၏စုစုပေါင်းအရှည်ပေါင်းစည်းတွေ့။ တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နှင့်အတူကာဇက်စတန်နယ်စပ် [ပို ... ]
မီးရထား Beykoz ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအသက်မွေးမှုကျောင်းKavacıkအဖြစ်အပျက်တင်ပြအတိတ် "အတိတ်လက်ရှိမီးရထား" ဖြစ်ရပ်ကျင်းပခဲ့သည်ရှိပါတယ်အဆိုပါညီလာခံခန်းမကျောင်းပရဝုဏ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အထွေထွေမန်နေဂျာ Yasar လမ်းကြောင်းမီးရထားလှုပ်ရှားမှုများအစည်းအရုံး၏ဧည့်သည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မစ္စတာ Rota အောက်ပါအကြောင်းအရာများအပေါ်တစ်ဦးမိန့်ခွန်းအားပေးသဖြင့်, [ပို ... ]
Rized စရိုက်ကေဘယ်လ်ကားမတော်တဆမှု (ဗီဒီယို)
သူတို့Gökçeလက်ဖက်ရည်စိုက်ခင်းဖဲ့အခြေခံမူသွားဖို့ cable ကိုကားတစ်စီးစီး၏သံမဏိကြိုးတွေနှင့်အတူ Rize နှစ်အရွယ် Erkan Mengen 406နှစ်အရွယ်သမီးအတွက် Rized စရိုက်ကေဘယ်လ်ကားမတော်တဆမှု။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အဖေဝန်ကြီးအဖွဲ့နှင့်အတူကြမ်းပြင်မှပျက်ကျလယ်တဲထဲကနေရွေ့လျားလျှင်မြန်စွာမိန်းကလေးများ assign ။ [ပို ... ]
Tüvasasလွှဲမရှောင်သာဖြစ်စဉ်ကို Erol inall စတင်မည်
ကျွန်ုပ်သည်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုခြင်းကိုဆန့်ကျင်သည်မဟုတ်၊ ဘဏ္Economicာရေးနှင့်လူမှုရေးအရဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်သောဘတ်ဂျက်ကိုဟန်ချက်မညီနိုင်သည့်အပြင်အခြားအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အကြွေးတင်နေသောပြည်နယ်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း (SOE) သည်ပြည်နယ်အတွက်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်သည်။ သောကြောင့်, အများပြည်သူ [ပို ... ]
ခရီးသွားဧည့်အပေါ် YHT လုယူရာဥစ္စာ
YHT ခရီးသွားဧည့်သည့်တူရကီ-Konya-တူရကီအတွက်အမဲလိုက်နဲ့အနည်းဆုံး 20 လူကိုယ်တိုင်သွားအုပ်စုကို-ခရီးစဉ် (ကားများအတွက်စီးပွားရေးကိုအတန်းအစား) အခကြေးငွေ 30 €, ကျောင်းသားများအုပ်စုများအပေါ်တူရကီနှင့် YHT ့ရက်အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကနှင့်ကြာသပတေးအကြားတူရကီ-Eskisehir-အလုပ်လုပ် 25 [ပို ... ]
အဆိုပါ izban နှင့်အတူဆုချီးမြှင့်ခံရကြလတံ့
အဆိုပါ izban Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်သဘာဝİZBAN TCDD ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူဆုချီးမြှင့်ခံရကြလတံ့, သူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေးအသင်းမှ 3400 အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအတွက်ဆုချီးမြှင့်ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ Binali Yildirim ဆုနှင့် Aziz က Kocaoglu နှင့်အတူသှားသောမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနှင့် TCDD [ပို ... ]
ဌာနေအချက်ပြ£2ဘီလီယံကိုကယ်တင်မည်။ တစ်အချက်ပြပါမောက္ခ၏အခွအေနကိုညွှန်းတူရကီအတွက်မီးရထားမှဒါအနီးကပ် 80, ဒေါက်တာ အဆိုပါရထားလမ်းအန္တရာယ်ကင်းနှင့်အဆင်ပြေလမ်းခရီးဘို့စနစ်များကိုပြ၏ Mehmet Turan Söylemezမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်, သူကပြောသည်။ ရထားလမ်းအတွက်ဒေသခံတွေ [ပို ... ]
တစ်ဦးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းတွင်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအတှေ့အကွုံရာပူဇော်သက္ကာကိုကကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင် Ordu ၏လှပသောပင်လယ်နက်မြို့မှာအရပ်ဌာနကိုယူ။ ကြည်းတပ်, တူရကီအရေးကြီးဆုံးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးမြို့တစ်ခုဖြစ်သည်ပေမယ့်, hazelnuts ၏ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်နားဖို့ကေဘယ်လ်ကားသစ်ချိုင့်ဝှမ်းဘူတာရုံ [ပို ... ]
Eskişehir Alaaddin ဗလီပြုပြင်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးအသင်းဥက္ကPresident္ဌ ssan Özelသည်ဒေသအားဖြတ်သန်းသွားမည့်လမ်းရထားလမ်းဖျက်သိမ်းခံရကြောင်းနှင့်ထိုအကြောင်းကြောင့်ဗလီဥယျာဉ်၌ရပ်တန့်ခဲ့သောŞadırvanဆောက်လုပ်ခြင်းကိုပြန်လည်စတင်သည်။ [ပို ... ]